Kyrgyzstan: Adihevitra noho ny famarotana ny orinasam-pirenena momba ny fifandraisan-davitra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Jona 2018 9:11 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Português, বাংলা, English
Nanao ny fanadihadiany manokana momba ny fifanarahana, izay namarotana ny petra-bolan'ny orinasam-pirenena Kyrgyzztelecom ireo mpisera malaza ao amin'ny forum aterineto Kyrgyz “Diesel“. Araka ny voalazan'izy ireo, mifamatotra amin'i Maksim, zanaka lahin'ny Filoha Kyrgyz, Kurmanbek Bakiyev’ izay voatendry vao haingana tamin'ny toerana ambony ara-toekarena ao amin'ny governemanta ireo tompon'ny orinasa vaovao.
Tonga tao amin'ny “Diesel” ny harivan'ny 4 Febroary, talohan'ny nahazoan'ny fampahalalam-baovao hafa ny vaovao voalohany momba ny famarotana ny ampahany betsaka tamin'ny Kyrgyztelecom:
“Namindin'izy ireo tamin'ny 2 Febroary ny [Kyrgyztelecom], saingy nangina avokoa ny fampahalalam-baovao rehetra, nanomboka ny adihevitra ilay mpisera S.S.S.R.
Voamarina ny zava-misy adiny 12 mahery taty aoriana. Nampiantso valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety ny minisitry ny fananam-panjakana Tursun Turdumamatov mba hampahafantatra fa namidy tamin'ny vondron'orinasa ahitana orinasa miisa efatra ny 78 isan-jaton'ny petrabolan'ny orinasam-pirenena nandritra ny varotra izay sahy ambony indrindra.
Voasoratra anarana ao Shipra ny roa amin'ireo orinasa efatra, ary ny iray ao Kazakhstan. Ny mpikambana ao amin'ny vondron'orinasa fahefatra kosa dia “Ala-Too Keni”, orinasa ara-bola Kyrgyz. Nifantoka momba ity farany ity ny “Diesel”.
Ora roa taorian'ny fanambaran'ny minisitra, nandefa vaovao avy amin'ny lahatahirya an-tserasera ao amin'ny Minisiteran'ny Fitsarana Kyrgyz ilay mpisera maka. Araka ny hita amin'izany, Adai Rustemov no tompon'ny “Ala Too Keni”.
Nilaza avy hatrany ireo mpisera hafa fa ao anatin'ireo talen'ny JSC “MGN Capital”, izay manana zo hitantanana ny fananan'ny Tahirim-bolan'ny Fampandrosoana an'ny Repoblika Kyrgyz io olona io.
Farany, ny Tahirim-bola ho an'ny Fampandrosoana dia mifandray mivantana amin'ny Foiben'ny Sampan-draharahan'ny Fampandrosoana, Fampiasam-bola sy ny Fanavaozana, sampam-panjakana vao noforonina, tarihan'i Maksim Bakiyev.
Mahaliana fa ny gazety Rosiana “Standard” dia nanoratra momba ny tombontsoan'i M. Bakiyev amin'ny fanomezana ny Kyrgyzztelecom hotantanin'ny tsy miankina tamin'ny taona 2009 – nilaza momba izany ny olona ao amin'ny “Diesel” :
“Araka ny filazan'ny gazetiboky, nandray anjara tamin'ny fizotry ny fanomezana ny orinasa hotantanin'ny tsy miankina ny zanaky ny filoham-pirenena Maksim Bakiyev. Mampahafantatra ny loharanom-baovao Kyrgyz ao amin'ny “Standard” fa te-hahazo fifehezana manokana amin'ny Kyrgyzztelecom i M. Bakiyev.
Mahatsiaro “kivy” noho ny faharatsian'ny fizarana indray fahatany ny fananam-panjakana ilay mpisera Mogul. Matahotra kosa ilay mpisera joomla fa hotsikilovin'ny sampana manokana Kazakh ny finday”, satria olom-pirenena Kazakh i Adai Rustemov.
Mpisera e-220 nilaza hoe:
“Miarahaba an'i Maksim Bakiyev noho ny fividianana vao haingana amin'ny anaran'ny vahoaka. Fantany ny fomba fampiasana ny tsenan'ny fitondrana Rosiana”.